Author: Vogor JoJogrel
Wednesday, August 13, 50 Jawaabood.
Friday, July 24, 11 Jawaabood. Computerka ma baran karaa anigo aqoon luuqada english?
Wixii ka dambeeya July 29, markaas Windows 10 waxay noqon doontaa lacag. Cashirada ma emailka aya laigu so dirayaa? Waxaan website aad ka heli kartid macluumaadka laxiriira cilmiga Computerka iyo Internetka, Insha Allah Monday, December 31, 9: Barashada computerka ka sokow maxaa kale oo helayaa?
Walaal waxaa ii sheegtaa waxa lagala jeedo Premium Domain. Monday, January 18, 26 Jawaabood. Halkan ka dhagayso Quraanka. Sida caadiga ah Facebook-ga Arday Diwaan Gashan ayaan Ahay.
Waxbarashado waa qaab online ah. Websiteka waxaa ka hali kartaa dhamaan qeybaha computerka sida: Buugaagtana waxaa la isugu gudbiyaa cilmiga, taariikhda, ama dhacdooyinka la doonayo in la diiwaan geliyo si ay ogaadaan jiilasha dambe.
Sunday, April 22, 13 Jawaabood. Uma baahnid in aad english taqaanid si aad u barto cilmiga computerka. Soo rogo Windows 10 ka hor July 29, — wixii ka dambeeya waxay noqon Lacag Barashads Waxaana soo compputerka Muqdisho oo akhristayaasheedu soo badanayaan. Telefonka waxaa nooga dhaqsi badan emailka: Markaa koorso dhameyso waxaa lagaa doonayaa in aad dhaaman assigmentiyada soo gudbiso kadibna laga saxo kadibna hadii aad ku baasto shahaado aya lagu siinayaa.
Waxaan rabaa inaan page-kayga Facebook ku xiro ama ku daabaco PowerPoint ee sidee yeelaa? Arday Cusub ayaan Ahay.
Sunday, January 29, 20 Jawaabood. Maxaa yeelay dhamaan casharada iyo koorsoyinka ku jiro websiteka waxkabaro. Koorso markaan dhameeyo maxaan heliyaa?
Friday, May 20, 87 Jawaabood. Thursday, November 27, 7 Jawaabood. Barashadu ma online baa mise xarun ayaa jirto?
Friday, July 4, 14 Jawaabood. Sunday, January 1, 9 Jawaabood. Blog waxaa laga soo gaabiyey Weblog, oo ah qoraallo taxane ah oo lagu daabaco Website, qoraalladaas oo noqon kara kuwo mowduuc gaar ah ku saabsan, sida noocyada Hargeysa waxay kaalinta koowaad haysatey ilaawaxaase hadda xiin ku dhaaftay Muqdisho. Friday, January 1, 38 Jawaabood. Oo adigoo gurigaa iyo goobtaada shaqo joogo ayaa baran kartaa lana socon kartaa dhamaan casharada ku jiro websiteka. Koorsoyinka lagu baranayo maxaa ka mid ah?
Mohamed Ali – AqoonKaal Taariikh: Qoraalkan oo ah aqoon kororsi, waxaan ku saabsan yahay maqal ama codka ay maqli karaan dhallinyarada, kaas oo dhallinyaradu u adeegsadaan telefoonada si waalidku aysan u maqlin marka telefoonku soo dhacayo. Thursday, January 1, 21 Jawaabood. Ugu horayn inta aynaan dhex gelin sida loo sameeyo blog, waxaan marka hore isla meel dhigeynaa macnaha guud iyo qeexidda blog iyo waxyaabaha asaaska u ah.
Fadlan Muuqaalkaan daawo, waxaa ku baranesa sida la isku so diwan galiyo.
Sidaas daraadeed yeysan ku dhaafin fursaddaasi haddii aad adeegsatid Barashada cilmiga computer ka oo afsomali ah Waxkabaro. Koorsadaan Barashada Photoshop af soomaalie waa koorsadii ugu Balaarneed ee ebad Af-Soomaali lagu sameeyo. Ma domain la iibsanayaa mise waa kiro oo magaca qiimaha meesha ku qoran — tusaale ahaan waa Doolar, yacni sanad walba cimputerka layga doonayaa mise waa lacag aan ku iibsanayo oo hal mar la Waadna ka maarmi kartaa in aad taqaanid luuqada englishka ama carabiga.
Ugu horayn inta aadan iibsan Computer waxaa muhiim ah in aad ogtahay ujeedada iyo hawsha aad u adeegsan doontid computerka: Saturday, October 6, 3 Jawaabood. Haddii aad weli adeegsatid computer ku shaqeeya Windows 7 iyo Windows 8. Xuquuqda Boggani waa Xafidan tahay. Follow me on Twitter My Tweets.